Modely taratasy: mangataka fandoavam-bola amin'ny fialan-tsasatrao tsy miasa
Posted by Tranquillus | Nov 26, 2020 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Mila a môdely litera mba hitaky ny fandoavana ny fialan-tsasatrao alohan'ny hahavery azy? Ireto misy ohatra roa mahazatra izay ho hitanao fa ilaina amin'ny fangatahana fandoavam-bola. Anisan'ny zonao ny fialana. Ny lalàna dia mitanisa karazana fialan-tsasatra isan-karazany azo alaina arakaraka ny toe-javatra. Ireo vanim-potoana tsy fampandehanana ireo dia voafehin'ny kalandrie mazava. Mety tsy ho vitanao sy ny mpampiasa anao izany na inona na inona antony. Handray ny fialan-tsasatrao rehetra amin'ny daty voatondro ao amin'ny rafitrao. Ahoana ny fangatahana ny fandoavana ny fialan-tsasatra karamany tsy noraisina?
Araka ny lahatsoratra L. 3141-3 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asal, mpiasa rehetra, na inona na inona zokiny, fifanarahana na satan'izy ireo. Anaram-boninahitra hatramin'ny 2,5 andro fialan-tsasatra karama isam-bolana. Ny kajy dia mifototra amin'ny fiheverana ilay antsoina hoe ora tena izy, izay manondro ireo vanim-potoana ananan'ny mpampiasa azy amin'ny asany.
Ny ravina na ny tsy fahatongavana sasany dia raisina ihany koa. Ohatra, fialan-tsasatry ny ray aman-dreny na fananganana zanaka, fiatoana mifandraika amin'ny aretin'ny asa iray na lozam-pifamoivoizana iray any am-piasana, fiofanana arak'asa. Ny fepetra fifanarahana dia mety hanome fialan-tsasatra fanampiny karama.
Ahoana ny fakana vakansy karama?
Ny fialan-tsasatra aloa dia azo ara-dalàna mandritra ny vanim-potoana fanovozan-kevitra, manomboka amin'ny 1 Jona tamin'ny taona lasa ka hatramin'ny 31 Mey amin'ny taona ankehitriny, raha tsy hoe nifanarahana, nafoana na nifanarahana. Raha ny voalazan'ny Article L. 3141-12 ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa frantsay dia azo atao ny maka fialan-tsasatra rehefa karamaina. Tsy maintsy apetraka mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fanapahan-kevitra manan-kery ao amin'ny orinasanao.
Inona no mitranga amin'ny fialan-tsasatra karama tsy raisina?
Raha ny fitsipika dia, raha tsy nalain'ny mpiasa ny karama fialan-tsasatra nananany izay azony nandritra ny vanim-potoana voatondro dia ho very izany. Raha ny mahazatra dia tsy afaka mitondra azy ireo amin'ny vanim-potoana manaraka izy. Na izany aza, mamela izany ny lalàna raha toa ka manan-kery ny fifanarahana na ny fampiasana ao amin'ny orinasa. Toy izany koa raha toa ka aorian'ny fialan-tsasatry ny ray aman-dreny na ny fananganan-jaza ny fanemorana. Ary koa raha sendra tsy eo ny mpiasa aorian'ny aretina vokatry ny asa na lozam-pifamoivoizana.
HAMAKY Fomba hanatsarana haingana ny fanoratana ny antontan-taratasinao, discovery Antidote rindrambaiko.
Mikasika ny fialantsasatra marary, na matihanina na anarana. Hisy fiatraikany amin'ny fanemorana ny fialan-tsasatrao izany. Raha talohan'ny fialantsasatra ny zava-nitranga dia tsy ho very izy ireo. Ny mpiasa dia afaka mahazo tombony amin'ny fanemorana azy ireo, aorian'ny datin'ny fiverenan'ny asa. Etsy ankilany, raha misy ny aretina na ny lozam-pifamoivoizana mandritra ny fialan-tsasatra karama, ny mpiasa dia tsy hahazo fanitarana, raha tsy misy fifanarahana na fifanarahana iraisana manome izany.
Raha tsy azo atao ny fanemorana ny fialan-tsasatra karama dia ho very ara-dalàna izany. Raha tsy hoe ny tsy fetezan'ilay mpampiasa no mahatonga izany tsy fahafaha-manao izany. Araka izany dia tsy maintsy manonitra ny mpiasa ity farany.
Ny fangatahana fandoavana ny karama fialan-tsasatra tsy noraisina
Amin'ny toe-javatra sasany, ny mpiasa dia tsy afaka nankafy ny fialan-tsasatra nalainy rehetra. Izany no izy raha toa ka nandà ny fanomezana ny mpampiasa noho ny habetsahan'ny asa be loatra na raha olona maro no te hiala amin'ny daty mitovy. Afaka mangataka amin'ny mpampiasa azy araka izany ny mpiasa amin'ny fandoavana onitra amin'ny fialan-tsasatra karama.
Toy izany koa ny fanitsakitsahana ny fifanarahana, na fametraham-pialana, fandroahana, fampitsaharana fifanarahana na fisotroan-dronono. Ny mpiasa dia mahazo, noho ny fialan-tsasatra karama tsy noraisina tamin'ny datin'ny fanafoanana, ny tambin-karama napetraka mifanaraka amin'ny andininy L3141-28 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa.
Raha azonao ny iray amin'ireto karama ireto, saingy mbola tsy nahazo na inona na inona ianao. Manampy ny mampatsiahy ny mpampiasa anao ny zonao. Ity fangatahana ity dia tsy miankina amin'ny fombafomba manokana. Fa alohan'ny hidirana an-tsehatra am-bava na amin'ny alàlan'ny paositra. Zahao ireo fifanarahana azo ampiharina amin'ny orinasanao.
HAMAKY Ahoana ny fanamarinana lahatsoratra iray matihanina?
Ohatra amin'ny taratasy mangataka fandoavana ny fialan-tsasatra karama tsy ampiasaina
Lohahevitra: Fangatahana tambiny noho ny fialan-tsasatra karama tsy nalaina
Mpiasa ao amin'ny orinasanay ho [fiasa] hatramin'ny [daty], nandefa anao aho, araka ny nifanarahana, ny fangatahana fialan-tsasatra amin'ny alàlan'ny mailaka mandritra ny [daty] ka hatramin'ny [daty].
Tamin'ny voalohany, nolavinao ny fialako fialan-tsasatra noho ny asa mavesatra loatra tamin'izany. Nahemotra noho izany ny fialan-tsasatra nataoko. Ny hetsika ao amin'ny orinasa dia tsy nitsahatra nitombo taorian'izay. Ho tapitra ny fe-potoam-panovozan-kevitra nefa tsy nanararaotra naka ny fialako aho.
Rehefa avy nanadihady ny taratasy fandoavam-bola farany nataoko aho dia nahatsikaritra fa ireo andro fialan-tsasatra karama tsy noraisina ireo dia tsy tao anatin'ny fifandanjako. Na izany aza, mampahatsiahy anao aho fa ny lalàna mifehy ny tranga dia manome ny zon'ny mpiasa hahazo tombony amin'ny tambin-karama sy ireo raha toa ka tokony ho an'ny mpampiasa izany.
Noho izany, feno fankasitrahana aho raha afaka miditra an-tsehatra ianareo mba hahazoako ny vola onitra mifanaraka amin'ny [isa] andro fialan-tsasatra izay tsy zakako. Na farafaharatsiny mba hitondra fanazavana kely momba ny toe-javatra misy ahy raha misy lesoka avy amiko.
Manisa ny sainao aho, ekeo azafady, Tompoko, ny arahaba feno.
ATAOVY MAIMAIMPOANA ATO AMIN'NY SITE
Ohatra amin'ny fangatahana fandoavana ny karama fialan-tsasatra tsy noraisina taorian'ny famaranana ny fifanarahana
Lohahevitra: Fangatahana fandoavana onitra amin'ny fialan-tsasatra karama
Araho izao ny fanarahan-dalàna ny fifandanjako ny kaontiko rehetra vokatry ny fijanonan'ny fifanarahana asa izay namatotra anay noho ny fametraham-pialako / ny fandroahana ahy /, sns.
Araka izany dia nalefanao ho ahy ny taratasiko farany. Saingy taorian'ny fakana hevitra azy dia hitako fa tsy miresaka momba ny tambiny fialan-tsasatra karama izany.
Na izany aza, voalazan'ny lalàna mifehy ny raharaha ao amin'ny andininy L 223-14 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa fa «rehefa tapitra ny fifanarahana asa alohan'ny hahafahan'ny mpiasa mahazo tombony amin'ny fialan-tsasatra rehetra azony, dia mahazo ny ampahany amin'ny fialan-tsasatra izy izay tsy nahazoany tombony, onitra fanonerana… ”, izany hoe amiko dia mitovy amin'ny [isa] andro nialako tamin'ny orinasa.
Tiako ny misaotra anao noho ny fandoavanao ahy ny vola tokony hividianana ahy faran'izay haingana. Te hanana olon-kafa handefa taratasy fandoavam-bola vaovao koa aho.
Mandritra izany fotoana izany, azafady mba raiso, Ramatoa, ny fanehoana ny fahatsapako manavaka.
Ampidino ny "Ohatra amin'ny taratasy fangatahana fandoavana ny fialan-tsasatra tsy noraisina"	ohatra-ny-taratasy-mangataka-fandoavana-ny-ravina-tsy-voaloa.docx – Nalaina in-901 – 13 Kio
Sintomy ny "ohatra-ny-fangatahana-ho-fandoavam-karama-tsy-nalaina-taorian'ny-fandikana-ny-fifanarahana.docx"	Ohatra-ny-fandoavana-fangatahana-ho-karama-tsy-nalaina-taorian'ny-ny-fanitsakitsahana-ny-fifanarahana.docx - Nampidirina in-5519 - 20 Kb
Modely taratasy: mangataka fandoavam-bola amin'ny fialan-tsasatrao tsy miasa June 26th, 2022Tranquillus
Teo alohaFandroahana noho ny antony ara-toekarena: lesoka amin'ny mpampiasa mandrahona ny fifaninanan'ny orinasa
manarakaShopify maimaim-poana: The Dashboard
Taratasy santionany hitakiana fandoavana premium